မထင်မှတ် ထားလောက်အောင် ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်ပါမည်ဟု သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ အကြောင်း MWD မှ ကြေငြာကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်…. – Shwe Naung
ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးတို့ဇနီးနောင် နှံကိုလူတိုင်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ၊သူတို့ဇနီးမောင်နှံ ဟာမြန်မာ့ အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင် သလို ပရိတ်သက် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုလည် အခိုင်အမာ ရရှိထားတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ် ယောက်ဟာနွေဦးတော် လှန်ရေးမှာအားသွန်ခွန်စိုက် ပါဝင်ခဲ့သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ထိုကြောင့်၅၀၅ကဖြင့် အမူဖွင့်‌အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူတို့နှစ်‌ဦးအဖမ်းခံရ တာလည်း၄လ‌ ကျော်ကြာခဲ့ပီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ MWD က သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနှင့်အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုကွင်းလုံး ကျွတ်လွှတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းMWDကကြေညာသွားပါတယ် လို့ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လို့ နေပါတယ်။
ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကတော့ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် ဒီသတင်းသာအမှန် တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပရိတ်သတ် တွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြမှာ တော့ အမှန် တကယ်ပါပဲ။
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနှင့်အိန္ဒြာ ကျော်ဇင်တို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါ စေလို့လည်း ပရိတ်သက် ကြီးနဲ့ အတူ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှုအားပေး သောချစ်ပရီသတ်ကြီးလည်း သာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အယ်လာရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
ရတနာမိုင်ကလဲဖေကြီးရွှေပန်းတိမ်ဆရာကြီးဦးမောင်ရင်၊ စက်တင်ဘာ၂၅စနေနေ့၊ည၆နာရီ၃၀ အချိန်တွင်ဖေကြီးဘဝတပါးသို့ကူးပြောင်း………..
ဆွဲ‌ဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….